"Madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin’ny olona madio; fa raha amin’ny olona voaloto sady tsy mino kosa dia tsy misy madio na inona na inona; fa voaloto na ny sainy na ny fieritreretany." Titosy 1:15
Lazaina matetika fa ny olona tsirairay dia samy mandeha araka ny fieritreretany, izany hoe araka ilay feo anaty miteny amintsika hoe: tsara izao, ratsy, diso, marina. Ny fieritreretana dia azo oharina amina mizana misy lelany roa izay mampiseho raha mitovy lanja ny zavatra roa. Ny mizana dia tsy miantoka ny fahamarinan’ny lanja anoharana. Toy izany koa, ny fieritreretana dia mamaritra ireo fitsarany, ireo fomba fandanjany, miohatra amina fenitra izay tsy voatery ho tsara foana.
Ny fieritreretana dia fahaizana ampiasain’ny saina, tahaka ny fahitana, izay fahaizana ampiasain’ny maso. Ny maso dia tsy afaka mahita na inona na inona, raha tsy misy hazavana; toy izany koa, ny fieritreretana dia mila ny hazavana avy amin’Andriamanitra, mba hananany fahaiza-manavaka. Ny hazavana dia tsy miankina amin’ny maso; ny hazavana no ahafahan’ny maso mahita.
Ny fieritreretana dia ao anatin’ny maha olona, fa ny fahalalana ny marina sy ny mahitsy kosa dia avy amin’Andriamanitra.
Ahoana no ahazoana miditra ao amin’izany fahalalana izany? Amin’ny alalan’ny Baiboly, ilay Tenin’Andriamanitra. Asehon’ny Baiboly antsika indrindra indrindra ny momba an’i Jesosy, Ilay Zanak’Andriamanitra, tonga tety an-tany, mba hanome ho antsika fahalalana velona ireo toetran’Andriamanitra: fahamarinana, fahitsiana, fahamasinana, hamoram-po, fangorahana, famindrampo, fitiavana… Tena toetran’i Jesosy koa ireo, satria Izy dia Andriamanitra. Hoy Izy: “Izay nahita Ahy, dia nahita ny Ray (Andriamanitra)”, “Izaho no fahazavan’izao tontolo izao” (Jaona 14:9 ;8.12).
Aoka isika hitoetra ao anatin’izany fahazavana izany, aoka hifototra mandrakariva amin’ny Baiboly, izay mampahafantatra antsika io fahazavana io. Dia hanondro amintsika ny lalana tokony hizorana ny fieritreretantsika.